စင်္ကာပူ PSB Academy ၏ Partner Universities များ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲန&#41 — MYSTERY ZILLION
စင်္ကာပူ PSB Academy ၏ Partner Universities များ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲန&#41
စင်္ကာပူ PSB Academy ၏ Partner Universities များအကြောင်းနှင့် CSULB Scholarship Test အကြောင်းအသေးစိတ်သိလိုသူများအနေဖြင့်၊ CROWN Consulting Limited, ရုံခန်းတည်ရှိရာ Room 228-229, Summit Parkview Hotel တွင် JUNE 11 (Thursday), 2009, 4:00 p.m မှ 5:00 p.m တစ်ဦးခြင်းလာရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်၊၊
PSB နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော California State University, Long Beach, USA, University of Wollongong, Australia, University of Newcastle, Australia နှင့် University of London, UK တို ့၏ ဘာသာရပ်များနှင့်ပါတ်သက်၍ ဆွေးနွေးဟောပြောမည်ဖြစ်ပြီး Scholarship Test အတွက် Registration ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်၊
Scholarship Test မှာ California State University, Long Beach, USA ၏ Bachelor of Science in Business Administration သြဂုတ်လတန်းအတွက်ဖြစ်ပြီး Scholarship မှာ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ဖြစ်သည်။ PSB Academy မှ ၂၀၀၉ခုနှစ်တခု လုံးတွင် မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် California State University, Long Beach ၏ BSC in Business Administration ဘာသာရပ်အ တွက် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ Scholarship ဆု၃၀၊ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ Study Grant ဆု ၅၀ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီနှင့် မေလ Intake များအတွက် မြန်မာကျောင်းသား ၁၀ယောက် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ Scholarship ကိုရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
PSB Academy တွင် 2009 Augest Intake မှ စတင်ပြီး Australia နိုင်ငံ၏ Top University တစ်ခုဖြစ်သော University of Wollongong မှ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်မည့် Bachelor of Commerce in (Finance), Bachelor of Commerce (Management), Bachelor of Commerce (Marketing), Bachelor of Commerce (Public Relations) နှင့် Bachelor of Commerce (Supply Chain Management) ဘာသာရပ်များကို တက်ရောက်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ University of Wollongong သည်သြစတြေးလျနိုင်ငံအစိုးရမှ ရွေးချယ်သတ်မှတ်သည့် ပညာသင်ကြားလေ့လာရေးတွင် ဘာသာရပ်အားလုံး (Business, Law &
Economics, Health, Humanities, Arts & Education, Science, Computing, Engineering, Architecture & Agriculture) တွင်အကောင်းဆုံး A1 Raking ကို ရရှိထားသည့် ့နာမည်ကျော်တက္ကလိုလ်ဖြစ်ပါသည်၊၊
PSB Academy တွင် University of Newcastle မှချီးမြှင့်မည့် Bachelor of Engineering (Electrical) အတွက် Study Grant စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ကို ဆက်လက်လျောက်ထားနိုင်ပြီး Electrical ဘာသာရပ်အပြင် University of Newcastle ၏ Bachelor of Engineering (Mechanical) ဘာသာရပ်ကိုလည်း လျောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
PSB တွင် University of Newcastle မှပေးအပ်မည့် Bachelor of Information Technology (IT Applications & Business Information Systems)၊ Bachelor of Business in Marketing and Management နှင့် Marketing & Tourism ၊ Bachelor of Commerce in Accounting နှင့် Bachelor of Communication (Public Relations and Journalism) ၊ Master of Business Administration ၊ University of Wollongong, Australia မှတိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်မည့် Bachelor of Commerce in Finance ၊ Management ၊ Marketing ၊ Public Relations နှင့် Supply Chain Management အထူးပြုဘွဲ ့များ၊ University of London, UK မှပေးအပ်မည့် Bachelor of Science (Hons) ဘွဲ ့များဖြစ်သော Accounting and Finance ၊ Banking and Finance ၊ Business ၊ Economics and Management နှင့် Management ဘာသာရပ်များကို တက်ရောက်နိုင်သည် ။
၄င်း Partner Universities များအကြောင်းနှင့် CSULB Scholarship Test သို ့တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့်၊ CROWN Consulting Limited, ရုံခန်းတည်ရှိရာ Room 228-229, Summit Parkview Hotel တွင် JUNE 11, 2009, 4:00 p.m မှ 5:00 p.m တစ်ဦးခြင်းလာရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်၊၊
Summit Parkview Hotel, Room 228-229, No. 350, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar, Tel: (95-1) 211 888 Fax: (95-1) 227 992, Mobile: 09 50 85 185
Mandalay Swam Hotel, Business Suite #4: Tel: (95-2) 31591, 31619 Mobile: 09 2035030:
binary........MZ ကို email ကရတာကိုတဆင့်တင်ပြပါသည်
hi ဒီ page ကို တွေ ့လို ့မေးချင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်က IADCS ပြီးပါပြီ..BCီISတက်မလို့computer universityက(Degree)ရ ပြီးသွားလို. တက်စရာမလိုဘဲ Master(singapore or NCC education or.....မှာ) တက်လို ့ရတယ်ပြောပါတယ်....ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.. ဘာကျောင်းလျောက်သင့်လဲ...ဒါမှမဟုတ် ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲဆိုတာ အကြံကောင်းလေးများရှိရင် ပေးကြပါ ...ဟိုစလုံးမှာ ကျောင်းတက်ရင်း(Master) အလုပ်လုပ်ကြတယ်ပြောပါတယ်သေချာနားမလည်လို.ပါ:77::77::77::77::77:
my mail [email protected] ပါ
မြန်မာပြည်မှာရသလောက်ကိုမြန်မြန်လေးရှာစေချင်တယ်....ပြီးမှလိုတာကို sg မှာတတ်တာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်.....money သက်သာတယ်လေဗျာ...